Lambarrada kiisaska togan ee COVID-19 ee aagga metro ee Sioux City ayaa si weyn u booday Khamiista | KWIT
Sarkaal ka tirsan Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay tirada kiisaska badan ayaa la filayaa sababta oo ah korodh weyn oo ku yimaadda tijaabooyinka ka socda aagga. Iyo, isbeddelku wuu sii socon doonaa.
Waxaa jira 176 xaaladood oo cusub gobolka Iowa guud ahaan ku dhawaad ​​4,000. In kabadan ¼ dacwadaha waxay ka socdaan Gobolka Woodbury.
Waxa kale oo jiray lix dhimasho oo kale oo tiradoodu ahayd 96 qof.
Winnebago Tribe ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 ee ku saabsan boos celinta.
Qofka ayaa la tijaabiyey oo guriga ayuu ku sugan yahay oo xaaladdiisu way wanaagsan tahay.
Boos celintu waxay ku jirtaa bandoowga laga bilaabo 7 p.m. ilaa 5 a.m. in la isku dayo oo laga hortago fiditaanka cudurka.
Cunnooyinka loo yaqaan 'Interbake Foods' ee Waqooyiga Sioux City ayaa si ku meelgaar ah u xirmay ka dib markii shaqaale uu tijaabiyey cudurka loo yaqaan 'COVID-19'.
Shirkadda ayaa nadiifinaysa oo fayadhowrka xarunta ka heleysaa.
Dhamaan shaqaalaha si dhaw ula shaqeeynayey shaqada waxaa laga codsanayaa inay is karantiimiyaan.
Howl wadeenada Park Jefferson ee Waqooyiga Sioux City ayaa sheegaya in ay sabab u tahay cadaadis uga yimid gudoomiyaha gobolka Noem iyo xitaa tartamada CDC ayaa socon doona dhamaadka isbuucaan, laakiin daawadayaal la'aan maahan.
Ku dhawaaqida ayaa lagu sameeyay Facebook.
Madashu waxay iibisay in ka badan 700 tikit oo tartamada ah waxayna hadda soo bandhigi doontaa lacag celin dhameystiran.
Taageerayaashu telefishanka ayey ku daawan karaan.
Iowa Gov. Kim Reynolds ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay jawaabta gobolada cusub ee Website Iowa.
48kii saacadood ee ugu horreeyay 121,000 Iows ayaa ka qaybqaatay.
Gobolka Iowa wuxuu bixiyay $ 26 milyan si uu uga qeyb qaato barnaamijka imtixaanka. Waxay sidoo kale ka socotaa Nebraska sidoo kale.